Manoloana ny vaovao tsy marina ahely amin'ny tambazotra Facebook mikasika ny fanafihana sy fanapotehana ny tobi-paritry ny Zandarimariam-pirenena ny alin'ny 26 desambra 2020 ao Imerintsiatosika dia tsara ny hanazavana ny tena zava-nisy sy marina.
Ny 26 desambra 2020 tokony ho tamin'ny 01 ora maraina, dia nahazo antso tamin'ny 119 ny Zandary fa misy jiolahy manafika ao an-tampontananan'i Imerintsiatosika. Rehefa namonjy tao amin'ilay toerana voatafika ireo Zandary dia lasa nitsoaka ireo jiolahy.
Nitohy ny fikarohana ireo olon-dratsy niaraka tamin'ny niharam-boina ka hita ny jiolahy iray. Rehefa nahita Zandary izy io dia nitsoaka ka nifanenjehana. Nitsambikina tamin'ny tamboho izy, kanjo nianjera tany ambany ka ny lohany no nianjera taloha. Naratra mafy ka nentina tany amin’ny hopitaly saingy tsy tana ny ainy.
Tao aorian'izay no nisy nanaparitaka feo ireo jiolahy namany fa maty voatifitry ny Zandary izy ka nitarika nanafika ny tobin'ny Zandary.
Araka ny toromarika sy baiko nomena dia tsy maintsy miaro ny Toby ireo Zandary, ary tokony hiaro-tena ihany koa. Ka afaka mampiasa ny fitaovana eo ampelatanany hanatanterahana izany. Tifi-danitra sy baomba mandatsa-dranomaso no nampiasaina hanaparitahana ireo andian’olona nandrava.
Efa nomena baiko manokana ihany ireo Zandary fa "rehefa tsy misy azo anoharana manoloana ny fanafihana ny toby dia afaka mitifitra ianareo". Zandary mpanao vonjy taitra anjatony, izay notarihin'ny Jeneraly Komandin'ny Fari-piadidiana Antananarivo, avy aty Antananarivo sy Arivonimamo no nalefa nanampy ireo tao an-toerana.
Vokany, tsy nisy aina nafoy, saingy Zandary maherifo miisa 3 no naratra, potika tanteraka ny tambohon'ny toby, nahitàna faharavàna 50% ny biraon'ny toby, moto miisa dimy (5) no may, 3 an'ny Zandarimaria, 2 an'ny Zandary miasa ao.
Efa misokatra ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ao an-toerana hisamborana ireo jiolahy nanafika sy ireo nanentana ny fanafihana ny Tobin'ny Zandary, ary ireo nahavanon-doza nanafika sy nanimba zavatra.
Marihina fa efa nisy toy izao tao Imerintsiatosika tamin'ny fotoana Tetezamita fa tsy nisy fisamborana tamin'izay ka tsy mety fay ny olona sasany, fa amin'ity indray mitoraka ity dia ampiharina ny maha-tany tan-dalàna an'i Madagasikara.
Hatreto, olona 6 no efa voasambotra izay ananana porofo fa nahavita ny fanafihana sy nandrava ny toby. Hivoatra izany satria efa namboraka ireo namany izy ireo.
Marihina ihany koa fa efa manana Tobi-paritra vaovao ny Zandarimaria ao Imerintsiatosika. Namafisina ny fiarovana sy fampandriana fahalemana ao Imerintsiatosika na andro na alina.